Huawei P30 Lite: famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Ny Huawei P30 Lite dia ofisialy izao
Omaly dia natolotra ny Huawei P30 sy P30 Pro amin'ny fomba ofisialy amin'ny hetsika any Paris. Io no avo lenta farany havaozina an'ny marika sinoa, nantsoina hanjakazaka amin'ity fizarana ity amin'ny tsena Android. Ny zavatra mahazatra dia ireo fampisehoana ireo dia misy maodely telo, ny iray amin'izy ireo dia ny maodely Lite, zavatra tsotra kokoa. Na dia tamin'ny fampisehoana omaly aza dia tsy hitanay afa-tsy ireo maodely roa ireo. SAINGY ny Huawei P30 Lite dia ofisialy izao.
Hitantsika a kinova somary voaravaka modely avo lenta. Na dia aseho safidy tsara aza ity modely ity. Eo amin'ny lafiny famolavolana, ny Huawei P30 Lite dia miloka amin'ny endrika mitovy amin'ny maodely hafa. Hitanay koa ny fisian'ny fakantsary marobe ao.
Androany maraina dia tafaporitsaka ny sasany amin'ny antsipirian'ny telefaona. Rehefa afaka ora vitsivitsy dia efa ananantsika daholo ny antsipiriany rehetra momba ny marika afovoany vaovao an'ny marika sinoa. Toy ny fanao amin'ny telefaona ao anatin'ity fizarana ity, mampiasa Kirin 710 toy ny processeur ao anatiny.
1 Famaritana Huawei P30 Lite
Famaritana Huawei P30 Lite
Ny endrika dia tsy miova firy raha oharina amin'ireo maodely roa ambony. Sakan-tsarimihetsika misy ny lohany amin'ny endrika rano mitete iray, izay tsy manjaka loatra amin'ny efijery. Ho fanampin'izay, ny marika dia nisafidy ny hampihena ireo fefy voalaza ka hatramin'ny faran'izay avo indrindra amin'ny efijery voalaza, izay mamela ny fampiasana bebe kokoa ny alohan'ilay fitaovana. Ao ambadik'izany isika dia mahita fakan-tsary telo, izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo tanjaky ny telefaona. Ireto ny fepetra manokana momba ny Huawei P30 Lite:
efijery: IPS / LCD 6,15-inch miaraka amin'ny FullHD + Resolution (2.312 x 1.080 teboka)
processeur: Kirin 710
Fitahirizana anatiny: 128 GB (Azo aorina amin'ny microSD)
Fakan-tsary Rear: 24 + 8 + 2MP
Fakan-tsary eo aloha: MP 32
bateria: 3.340 mAh miaraka amina fiampangana haingana
Rafitra fandidiana: Android 9 Pie miaraka amin'ny EMUI 9.0.1
Conectividad: WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, USB-C, kapila finday
ny hafa: Fitaovana fakantsary aoriana
lafiny: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm
lanja: 159 grama
Mampanantena ny fizarana sary fa tsy isalasalana fa lafiny lehibe ao amin'ny Huawei P30 Lite. Ankoatry ny fahitana fanatsarana mazava ao aminy raha oharina amin'ny maodely tamin'ny taon-dasa. Raha izany dia, fakan-tsary telo aoriana no ampiasaina, raha oharina amin'ny fakantsary indroa tamin'ny taon-dasa. Izy io dia fitambaran'ireo sensor hafa. Amin'ny lafiny iray, manana ny mpijery 24 MP lehibe isika miaraka amin'ny zana-kazo f / 1.8, miaraka amin'ny sensor 8 MP faharoa ambaratonga faharoa ary fahatelo dia manana sensor 2 MP ToF izahay.
Huawei mankafy 9s ary mankafy 9e: ny afovoany vaovao an'ny marika sinoa
Ankoatra izany, fakan-tsarimihetsika artifisialy ny fakan-tsaryMisaotra ny NPU ao amin'ny Kirin 710. Amin'izany fomba izany dia sokajy 22 no azo fantarina ary sokajy valo raha ny fakan-tsary eo alohan'ny finday. Fakan-tsary 32 MP, izay hita eo amin'ny toeran'ny telefaona. Io ihany ilay sensor, toa farafaharatsiny mba hitantsika tamin'ny maodely roa hafa. Tsy mahalala na inona na inona momba ilay horonantsary amin'ity fitaovana ity izahay izao.
Ny Huawei P30 Lite dia manana bateria 3.340 mAh fahaiza-manao, izay misy ihany koa ny fanohanana amin'ny famahanana haingana. Etsy ankilany, noho ny fisian'ny Android Pie sy ny processeur Kirin 710, antenaina fa hanome antsika fahaleovan-tena tsara amin'ny fotoana rehetra izany. Satria ny rafitra miasa dia manana andiana fikirana bateria, izay ahafahana manatsara azy tsara, izay tokony ho fanampiana tsara ho an'ny mpampiasa. Amin'ity tranga ity, ny sensor ny dian-tànana dia voatazona ao ambadiky ny telefaona, tsy toy ny avo lenta, izay nampidirina tao amin'ny efijery. Tsy nisy na inona na inona voalaza momba ny famohana ny tarehy amin'ity maodely ity.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa mihitsy dia tsy nanamafy ny vidiny izay Huawei P30 Lite handeha hanana izany eny an-tsena. Na dia azo atao aza ny mahita ny vidiny dia mety ho an'ny fivarotana sasany any Canada. Ka afaka mahazo hevitra momba ny zavatra antenaina rehefa tonga any Espana ianao. Hatramin'ny any Canada dia manana vidiny 450 dolara izy io.
DxOMark manome ny isa ambony indrindra amin'ny Huawei P30 Pro
Manodidina ny 399 euro ny fiovana, izay mety ho vidiny hanombohana ity maodely ity any Eropa. Amin'izany fomba izany dia lafo kokoa noho ny hitantsika tamin'ny maodely tamin'ny taon-dasa. Saingy ny fanatsarana ny fakan-tsary, ary koa ny fanovana ny endrika dia nisy fiatraikany tamin'io lafiny io. Na dia miandry fanamafisana vitsivitsy aza izahay momba ny vidiny.
Navoaka tamina kinova tokana izy momba ny RAM sy fitehirizana anatiny, 6/128 GB. Raha ny loko, tsy toy ny maodely omaly, loko roa ihany isika amin'ity tranga ity. Alokaloka Twilight izy, miaraka amin'ireo loko manga-volomparasy ireo ary ny faharoa dia loko mainty mahazatra. Amin'izao fotoana izao dia tsy mahalala na inona na inona momba ny fandefasana azy amin'ny magazay izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Huawei P30 Lite dia ofisialy izao
Huawei P30 sy P30 Pro: havaozina ny avo lenta
Fihenam-bidy amin'ny Koogeek Home Products ao Amazon